Tarisa kuwanikwa kweiyo iPhone 7 uchishandisa mepu ino | IPhone nhau
Tarisa kuwanikwa kweiyo iPhone 7 uchishandisa mepu iyi
Kutsvaga kweiyo iPhone 7 yaunoda kuri kuomesesa kupfuura kweimwe Pokémon, kunyanya kune avo vanoda vatema, vanodya uye vanopenya vatema mamodheru. Kuita kuti zvinhu zvive nyore, kwete kuwana iyo iPhone yaunoda, zvinoenderana neApple, asi zvirinani kwete kutambisa nguva kutora zvisina maturo mafambiro kana kufona zvisina basa, At iStockNow ivo vanotipa isu mepu iyo inovandudzwa munguva chaiyo uye matinogona kuona kuwanikwa kwe iPhone 7 uye iPhone 7 Plus mune yega yega uye mune ese epanyama Apple zvitoro kutenderera pasirese. Zvakareruka sekusarudza modhi uye ruvara uye kutarisa kuti chitoro chipi chinoonekwa mutema. Zvese ruzivo uye zvinongedzo pazasi.
Iyo webhu inoshandisa Google Mepu kutipa munguva chaiyo kuwanikwa kwe iPhone 7 uye 7 Plus, kupa data kubva kuzvitoro zveApple muUnited States, Australia, Belgium, Canada, China, France, Germany, Hong Kong, Italy, Japan, Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland neUnited Kingdom.. Iyo webhu inobvumidza iwe kusefa yako yekutsvaga kwete chete neiyo iPhone modhi (7 kana 7 Plus) asi zvakare neruvara, kugona uye anoshanda, kunyangwe kuSpain vashandisi vacho vasingashande. Kana iwe uine rombo rakanaka uye mukutsvaga kwako chitoro chinowanikwa, iyo icon iyo iyo mhando ichave iine green. Nekudzvanya pairi, iwe uchaona ruzivo rwechitoro, apo ruzivo rwacho rwakapedzisira kuvandudzwa, uye kunyangwe mamodheru aanenge aripo. Zvinoita kunge zvisingaite kuti webhu inogona kuwana zvakawanda asi ichishandisa ruzivo rwakananga kubva kuApple, saka zvinoita sekunge yakavimbika chose.
Tichitamba zvishoma nemepu tinogona kuona kuti mudziyo unonyanya kushomeka ndiyo iyo iPhone 7 Plus mune yakasviba nhema, iyo isingawanikwe mune chero chitoro pasi, kunyangwe kazhinji iPhone 7 Plus iri shoma, nepo iyo iPhone 7 iri nyore kuwana, kunyanya mu "zvakajairika" mavara, senge goridhe, sirivheri kana pingi. Iwe une mepu inowanikwa pa Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Tarisa kuwanikwa kweiyo iPhone 7 uchishandisa mepu iyi
Apple iri kutoshanda kugadzirisa bug inodzivirira Lightning EarPods kubva kushanda nemazvo
Maitiro ekugadzira maPDF echinhu chero chipi zvacho uye ugovagovana ne 3D Kubata